Fikaroham-bahaolana : mbola hivory hanohizana ny fampihavanana ny FFKM | NewsMada
Fikaroham-bahaolana : mbola hivory hanohizana ny fampihavanana ny FFKM
Maka bahana. « Mbola hivory ny FFKM handinika ny hanohizana ny fampihavanana. Dingana mitohy sy lavalava izany fampihavanana izany fa tsy vita anatin’ny taona iray », hoy ny valin-teny fohy nataon’ny filohan’ny FFKM, ny pastora Rakoto Endor Modeste, ho an’ny mpanao gazety omaly tetsy amin’ny FJKM Analakely. Notanterahina tamin’io fotoana io ny famindram-pitantanana eo amin’ny filoha teo aloha, ny mpitandrina Rasendrahasina Lala nahavita ny taom-piasana 2015 sy ny filoha vaovao hitondra izany amin’ity taona ity, amin’ny alalan’ny FLM, ny Dr Rakoto Endor Modeste. Nialohavan’ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana sy ho an’ny firenena izany.
Nitondra ny ranombavaka ny Mgr Ranarivelo Samoela Jaona raha namaky ny tenin’Andriamanitra kosa, ny Mgr Razanakolona Odon. Naompan’ny mpitantana vaovao ny FFKM amin’ny famonjen’Andriamanitra sy ny fitiavany antsika ny toriteniny. « Manantena ny mpamonjy isika…. », hoy izy.
Etsy andaniny, vitsy ireo nanoina ny fanasan’ny FFKM tamin’ity indray mitoraka ity. Tsy anisan’ireo tonga niatrika izany na eto an-toerana aza ny Pr Zafy sy ny amiraly Ratsiraka ary Rajoelina.
Nisolo tena ny filoha Rajaonarimampianina kosa, ny Praiminisitra Ravelonarivo. Niatrika izany koa ny ben’ny Tanànan’Antananarivo Ravalomanana Lalao mivady.
Tsiahivina fa nitokanana ny fisokafan’ny Ivontoeram-piofanana ekiominika (IPE) eo anivon’ny FFKM koa ny fotoana.
Synèse R. sy Njato Hervé
Misokatra ny IPE-FFKM
Hisokatra manomboka anio etsy amin’ny CFPI Ampandrana ny Ivontoeram-piofanana ekiominika iarahana amin’ny FFKM. « Tsangambaton’ny faha-35 taona io ary natao hiofanan’ny zanaky ny FFKM momba ny fampiraisam-pinoana, hanomezana azy ireo fahalalana sy ny fototry ny fiombonana. Faharoa na fahatelo maneran-tany ity ivon-toerana ity », hoy ny tompon’andraikitra nitondra fanazavana.
Natokana ho an’ireo manana ny diplaoman’ny bakalorea ny fidirana ao ary maharitra telo taona ny faharetan’ny fianarana. 5 hetsy Ar ny saram-pianarana ary azo aloa tsikelikely. Manana fenitra, mitovy amin’ny ambaratonga ambony ny IPE, ary tafiditra amin’ny rafitry ny LMD. « Mbola hojerena ny hampiakarana dingana ambonimbony kokoa izany », hoy ihany izy ireo. Hisahana ny fampianarana kosa, ireo manana traikefa eo anivon’ny fiangonana efa-tonta.